‘छक्का पञ्जा २’ दशैँमा रिलिज हुने – Khabar Silo
‘छक्का पञ्जा २’ दशैँमा रिलिज हुने
काठमाडौं आफ्नो फिल्म ‘छ माया छपक्कै’ दशैँपछि रिलिज हुने भएपछि दशैँमा दीपकदीपाको फिल्म ‘छक्का पञ्जा २’ युट्युबमार्फत रिलिज गरिने भएको छ । फिल्मका निर्माता तथा कलाकार दीपकराज गिरीले यसबारेमा जानकारी दिए । दशैँको अवसर पारेर हलमा फिल्म ‘रातो टीका निधारमा’ समेत प्रदर्शन हुँदैछ ।
हलमा फिल्म हेर्न नपाएका दर्शकले लामो समयदेखि यो फिल्मको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् । यद्यपि यो फिल्म हलमा दोस्रोपटक रिलिज गरिएको थियो । र, फ्लप भएको थियो ।
चलचित्रमा प्रियंका कार्की, दीपकराज गिरी, जितु नेपाल, स्वरुपपुरुष ढकाल, केदार घिमिरे, वर्षा राउत, स्वस्तिमा खड्का लगायतका कलाकारले अभिनय गरेका छन् । हास्यप्रधान यो चलचित्र पहिलोपटक रिलिज हुँदा व्यावसायिक रुपमा सफल भएको थियो । त्यसपछि रिलिज भएको चलचित्र ‘छक्का पञ्जा ३’ पनि व्यावसायिक रुपमा सफल भएको थियो ।
विवाह किन गर्दैनन् अक्षय खन्ना ? उनैले बताए कारण
एजेन्सीअक्षय खन्ना एक यस्ता व्यक्ति हुन् जो महिनामा एकपटक वा एक वर्षमा एउटा फिल्म गर्ने भन्नेमा विश्वास गर्दैनन् । तर, उनी बाहिर सार्वजनिक रुपमा वा पब्लिक रुपमा एकपटक मात्र आउने कुरामा विश्वास गर्छन् । ४४ वर्षका यी अभिनेताले केही दिनअघि हिन्दुस्तान टाइम्सलाई एउटा अन्तर्वार्ता दिएका छन् जसले बलिउडमा ठूलो तरंग ल्याएको छ । विवाह, सम्बन्ध […]
बाहुबलीका कटप्पाको भेसमा देखिएका ‘प्रेम गीत–३’ का क्रान्तिवीर को हुन?पढ्नुहोस
बहुप्रतिक्षित चलचित्र प्रेम गीतको रिलिज को डेट नजिकिदै गर्दा बिभिन्न पात्राहरुको पोष्टर सार्बजनिक हुने क्रम जारी छ यसै क्रममा सन्तोष सेनकै पहिलो चलचित्र चंखे शंखे पंखेबाट चलचित्र क्षेत्रमा प्रबेस गरेका प्रमुख कलाकार प्रेम पुरी यो चलचित्र प्रेम गीत ३ मा पनि बिशेष भूमिकाको साथमा देखिने भएका छन।’प्रेम कथामा आधारित चलचित्र प्रेम गीत ३ मा उनि […]
माग्ने बुढाकी श्रीमती अचानक मिडीयामा ? भद्रगोल पछी सक्किगोनी खेल्दा जिग्री,पाडे र बले को रमाइलो ? (भिडियो हेर्नुस)
कुलमान घिसिङले काठमाडौंका घरबेटीलाई दिए यस्तो चे तावनी